Sober Time - Sober Day ကောင်တာ & Clean Time Clock APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန် - သမ္မာသတိရှိကြလော့နေ့ကောင်တာ & Clean အချိန်နာရီ
သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန် - သမ္မာသတိရှိကြလော့နေ့ကောင်တာ & Clean အချိန်နာရီ APK ကို
သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်သင်သည်သန့်ရှင်းသမ္မာသတိရှိကြလော့ပါပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးခြေရာခံတဲ့ built-in အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့သမ္မာသတိရှိကြလော့နေ့ကတန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့သမ္မာသတိရှိကြလော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခရီးစတင်ပါသို့မဟုတ်ဆက်လက်: သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်ရဲ့သမ္မာသတိရှိကြလော့နေ့ကတန်ပြန်ပြန်လည်ထူထောင်စွဲထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်တူသောလေးနက်စှဲမှထမြောက်ကူညီပေးနေသည်။
သမ္မာသတိရှိကြလော့နေ့ကကောင်တာများနှင့်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်း tracker ✔
✔ပိုက်ဆံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ခြေရာခံ
✔ Relapse စာရင်းဇယား
အဘယ်ကြောင့်ဒီအသမ္မာသတိရှိကြလော့ app ကိုကျင့်သောအကျင့်
ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်း၏အဓိကမှာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ထောက်ခံမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနေ့စဉ်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ပန်းတိုင်များနှင့်ရိုးရိုးအားဖြင့်သင့်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းကောင်တာကို tick စောင့်ကြည့်တွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ Built-in အသိုင်းအဝိုင်းသင်ဝေမျှနှင့်၎င်းတို့၏ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနာရီပေါ်နှစ်သို့မဟုတ်ပင်ဆယ်စုနှစ်နှင့်အတူလူကနေသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုတာလိုအပျတဲ့လူ့ connection ကိုပေးပါသည်။
ဤသည်သမ္မာသတိရှိကြလော့ app ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမ္မာသတိရှိကြလော့အဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသှားပါနှင့်နှလုံးနီးစပ်သည်သင်၏သန့်ရှင်းသောအချိန်တန်ပြန်စောင့်ရှောက်ရှိရာယင်းသည်တတ်၏။
သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်သင်ဖတ်သို့မဟုတ်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းမှဆက်စပ်ဘာမှဆှေးနှေးနိုငျတဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံအသိုင်းအဝိုင်းစာမျက်နှာရှိပါတယ်။ တခြားသူတွေရဲ့ပုံပြင်များမှတဆင့်ဖတ်ပါ, မေးခှနျးတှေမေး, သင့်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းတန်ပြန် share သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာပြန်လည်နာလန်ထူဘဝဆွေးနွေးပါ။ အဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သောက်သုံးရေကိုရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အဖိုးတန်အကြံဉာဏ်ကိုဆက်ကပ်။
စင်ကြယ်အချိန်တန်ပြန်အပြင်, သမ္မာသတိရှိကြလော့ပြန်လည်နာလန်ထူရပ်ရွာနောက်ကွယ်မှသော့နှင့် core ကိုလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို join နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်ကဲ့သို့အအကြောင်းအရာများ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကဆိုပါတယ်အရာကိုအခြားသူများကိုကြည့်ရှုပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း Add နှင့်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
တိုးတက်မှု Make နှင့်စောင့်ရှောက်
✔တစ်ဦးချင်းဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနာရီအထိ setting အားဖြင့်အသီးအသီးစွဲခြေရာခံသိမ်းဆည်းထားပါ
✔ Built-in သန့်ရှင်းတဲ့အချိန်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ထား
စှဲ✔ Track စာရင်းဇယား, အသုံးစရိတ်အလေ့အထများနှင့်ငွေစုကိုသင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်
တစ်ဦးဣန္ဒြေစောင့်ခြင်း tracker နာရီနှင့်အတူ✔အပြည့်အဝ-featured ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းတန်ပြန်
✔တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းကောင်တာနှင့်အတူအသီးအသီးစွဲ Customize, နောက်ခံ, icon များနှင့်ခေါင်းစဉ်
✔အဆိုပါဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနာရီအတွက်မဆိုစွဲစစ်မည်: (သိပ်အမြန်အစားအစာသို့မဟုတ်တီဗီနဲ့တူလျော့နည်းလေးနက်သောသူတို့ကိုမ) မူးယစ်ဆေးဝါး, အရက်, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, စီးကရက်
သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်နှင့်အတူသင်သည်သင်၏ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းကိုခြေရာခံများနှင့်သင်သွားလေရာရာ၌လှုံ့ဆော်မှုနေဖို့နိုင်ပါတယ်။ (သင်အရက်ထဲကနေဆင်းရဲခံရလျှင်) အရက်မသောက်, ဆေးလိပ်မသောက်သို့မဟုတ်အခြားစွဲ Quit ။ ဒါဟာမျိုးစုံခင်းကျင်းပြသရွေးချယ်စရာတစ်ခုအစွမ်းထက်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနာရီနှင့်ကောင်တာ, စိတ်ကြိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ခလုတ်များ၏တွန်းအားပေးမှာသင့်ရဲ့စပွန်ဆာသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်ဖုန်းဆက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်၏အဓိကရည်မှန်းချက်အမည်မသိစွဲနှင့်အရက်သမားကိုသူတို့စှဲမှထမြောက်သို့မဟုတ်အရက်သောက်ရပ်တန့်ပြန်လည်ထူထောင်ကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုကတော့ကြောင့်အရက်သောက်ဖြတ်ကြပါပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးစွဲကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုမယ့်, မူးယစ်ဆေးဝါး, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဆေးလိပ်စီးကရက်သို့မဟုတ်အခြားစှဲကနေသန့်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
, သင့်စှဲများ၏ထိန်းချုပ်မှုယူ recover နှင့်သင့်ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းမှအပေါ်ကျင်းပရန်ယခုသမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန်ရယူပါ!
Added Backup ကို & restore - Settings များအောက်မှာရှာတွေ့
သမ္မာသတိရှိကြလော့အချိန် - သမ္မာသတိရှိကြလော့နေ့ကောင်တာ & Clean အချိန်နာရီ
10.70 ကို MB